Bogga ugu weyn 15 Khabiir ee Paralegal -ka ugu Mushaarka Badan Adduunka
Paragaleyaal waa noocyo gaar ah oo sharci -yaqaanno leh khibrad shaqo oo aqoon leh iyo shahaadooyin si ay u fuliyaan hawlaha qaarkood qareen ahaan.
Waddanka Maraykanka, waxay qayb muhiim ah ka yihiin nidaamka sharciga ee Ciidanka Mareykanka waxaana laga filayaa inay wax ka qabtaan arrimaha sharciga iyo maamulka warshadaha badankood.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ku takhasusay Paralegal. Iyo sida xirfad kasta oo kale, khabiirada sharci -yaqaannada qaarkood waxay kasbadaan wax ka badan kuwa kale iyagoo tixgelinaya waajibaadkooda iyo shahaadooyinkooda waxbarasho.
The Xafiiska Tirakoobka Shaqada rikoodhku wuxuu muujinayaa in celceliska mushaharka lagu qiyaasay guud ahaan dalka ee loogu talagalay baarayaasha waa $ 49,500.
Maqaalkan, waxaan hoos u dhignay macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan khabiirada Paralegal -ka iyo sidoo kale liis dhammaystiran oo ah 15 khabiir oo ah kuwa ugu mushaharka badan paralegal -ka adduunka.
Si taxaddar leh u akhri!
Waa kuma Khabiirka Paralegal?
Paralegal waa qayb qiimo leh oo ka mid ah kooxda sharciga oo si fiican u yaqaan sharciga iyo arrimaha sharciga laakiin aan ahayn qareen shahaado haysta.
Guud ahaan, Baarayaasha waxay qabtaan hawlo badan oo maamul iyo sharci ah. Waxay si joogto ah ula shaqeeyaan garyaqaannada, garyaqaannada, iyo/ama madaxda sharciga ah ee kiraysan waxayna xubno ka yihiin Machadka Chartered ee Fuliyayaasha Sharciga (CILEx).
Si kastaba ha noqotee, waxay ka shaqeeyaan xafiisyada sharciga sidii shaqaale taageera, qabashada cilmi baaris sharci, abaabulka faylasha, iyo soo saarista dukumiintiyada.
Moreso, waxay ka caawiyaan qareennada diyaarinta shirarka shirkadaha, tijaabooyinka, dhegeysiga, iyo dhigaalka. Waajibaadku wuu kala duwan yahay iyadoo ku xiran baaxadda shirkadda iyo nooca sharciga lagu dhaqmo.
Waa Maxay Waajibaadka Baareye?
Asal ahaan, shaqaalihii garyaqaanku waa inuu ka caawiyo qareennada hawlaha maalinlaha ah ee ka dhigaya in habku si habsami leh u socdo.
Uruurinta iyo diyaarinta caddaynta baaritaannada iyo tijaabooyinka, samaynta cilmi -baarista si ay gacan uga geysato taageeridda sabab, iyo qoridda qoraalo ama soo -koobidda qoraallada iyo caddaymaha si loo hubiyo in qareen loo diyaariyo maxkamadaynta dhammaantood waa qayb ka mid ah shaqada.
Intaa waxaa dheer, waxay la xiriiraan markhaatiyada iyo macaamiisha si ay u abaabulaan ama u qabtaan shirar iyo waraysiyo.
Si ay u jebiyaan waajibaadkooda, hoosta waxaa ku yaal qaar ka mid ah waxyaabaha ay ku sameeyaan waaxyada kuwaas oo inta badan kala duwan:
Wadahadalada iyo cilmi baarista sharciga
Abuuritaanka dukumentiyo sharci oo aasaasi ah
Haynta macmiilka iyo horumarka
Intaa waxaa dheer, garyaqaannada ayaa laga yaabaa inay diyaar u noqdaan inay soo diyaariyaan warbixinno ka caawiya qareennada inay go'aan ka gaaraan sida loola macaamilo kiisaskooda.
Haddii ay dhacdo in la -taliyayaasha sharciga ay doortaan inay diiwaangeliyaan sheegashooyinka macaamiisha, garyaqaannada ayaa laga yaabaa inay ka caawiyaan qabyo -tirka warbixinnada waxayna dejiyaan murannada sharciga ah si loogu diiwaangeliyo maxkamadda.
Xafiisyada sharciga ayaa si isdaba joog ah u adeegsada barnaamijyada PC -ga iyo hal -abuurka qorshaynta horudhaca iyo kormeerka kaydadka. Paralegals -ku waxay adeegsadaan barnaamijyada PC -ga si ay u qorsheeyaan horudhacyada iyo inay qoraan oo qoraan kaydadka.
Paralegals -ku waxay aqbali karaan waajibaadyo dheeraad ah iyagoo matalaya awood badan gobollada kala duwan. Qayb ka mid ah goobahan waxay noqon kartaa dacwad -qaadid, sharciga shirkadaha, sharciga dembiyada, dhaawaca shaqsiga, faa'iidooyinka wakiilka, hal -abuurnimada la ilaaliyay, qallafsanaanta, dhaqdhaqaaqa, dhulka, iyo sharciga qoyska.
Ugu dambayn, barbaariyayaal khibrad leh, inta badan ayaa laga yaabaa inay aqbalaan waajibaadka maamul, sida u -qoondeynta shaqada paralegals kala duwan ama maamulidda mashaariicda kooxda.
Waa maxay Shahaadooyinka Waxbarashada ee loo baahan yahay?
Paralegal -ka ayaa sida caadiga ah haysta shahaadad la xiriirta, laakiin qaar baa laga yaabaa inay haystaan ​​shahaadada jaamacadda ama xitaa shahaadada mastarka.
Qareenku wuxuu shaqaaleysiin karaa garyaqaan leh aqoon gaar ah, sida diyaarinta canshuurta ama caddaaladda dembiyada, wuxuuna ku tababari karaa shaqada xaaladaha qaarkood.
Si kastaba ha ahaatee, Cilmiga Siyaasadda ayaa ah darajada ugu badan ee ay qabtaan paralegals -ka, oo u dhiganta 7% dhammaan barbaariyayaasha. Sharciga iyo balaale waa laba darajo oo kale oo la wada leeyahay.
Waa Maxay Aagagga Takhasuska Paralegal -ka?
Paralegal wuxuu ku takhasusi karaa meelaha soo socda:
Xeerka difaaca dembiyada
Sharciga hantida maguurtada ah
Sharciga hantida hantida
Qorshaynta guryaha iyo sharciga tijaabinta
Waa maxay Shaqooyinka Ku-takhasuska Baaraslaalka ee ugu Mushaharka Badan Adduunka?
Hoos waxaa ah 15ka ugu sarreeya khabiirada baaruugga ee ugu mushaarka badan adduunka:
Maareeyaha Mashruuca Sharciga ah
Paralegal Hantida Waxgaradka
Shaqaalaynta iyo Sharciga Shaqaalaha Paralegal
Paralegal -ka Dawladda
Dacwad -oogaha Difaaca Dadweynaha
Sharci yaqaan caalami ah
Dhibanaha Shakhsi ee Dhaawaca Qofka
Sharciga Qoyska Paralegal
Qorshaynta Hantida iyo Xeer -ilaaliyaha Guud
Paralegal -ka Guryaha ee Guryaha
1. Maamulaha Paralegal
Mushaharka Sannadlaha: $ 104,775
Sida laga soo xigtay cilmi-baaristeenna, maareeye Paralegal ayaa ah khabiirka bilayska ugu mushaharka badan adduunka oo leh celcelis ahaan in ka badan $ 104,775. Tani waa sababta oo ah isaga/iyada ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya berrinka.
Maamule paralegal ah ayaa kormeera barbarayaal kale. Maareeyuhu wuxuu abuuraa koox sharci yaqaan ah oo shaqaysa wuxuuna hubiyaa inay sameeyaan wax kasta oo ay tahay inay sameeyaan.
Taas ka sokow, isaga/iyada ayaa bixisa tababarka lagama maarmaanka ah, wuxuu kormeeraa diyaarinta dukumiintiyada muhiimka ah, wuxuuna kiisaska u xilsaaraa garyaqaannada.
Xusuusnow, si aad u noqoto maareeye bilaa sharci ah, waa inaad haysataa shahaadada koowaad ee jaamacadda, oo aan ka yarayn 5 sano oo waayo -aragnimo ah, iyo sidoo kale shahaado -siise sharciyeed. Inaad haysato 3 sano oo waayo -aragnimo kormeer ah waxay noqon kartaa faa'iido dheeraad ah.
2. Maareeyaha Mashruuca Sharciga ah
Mushaharka Sannadlaha: $ 87,375
Kani waa takhasusle kale oo mushaharka ugu sarreeya leh iyo sidoo kale jagada ugu dhaqsaha badan ee sii kordhaysa ee shirkad paralegal ah.
Maareeyayaashani waxay mas'uul ka yihiin inay qeexaan halbeegyada arrinka xagga hore, waxay baaraan sida ay arrintu tahay, maareynta iyo xakamaynta arrinta, iyo sidoo kale qiimeynta siyaabaha suurtagalka ah ee xal u helidda.
Taas ka sokow, maareeyaha mashruuca sharciga ah wuxuu tilmaamaa xalka farsamada, wuxuu sameeyaa miisaaniyad, wuxuu la xiriiraa macaamiisha, wuxuuna sidoo kale qareennada ku hayaa waddada.
3. Paralegal Hantida Waxgaradka
Paralegal Property Paralegal waa mid ka mid ah khabiirada baaraalka ee ugu muhiimsan adduunka marka laga hadlayo ilaalinta nafta iyo hantida.
Tani waa sababta ay sidoo kale lacag badan uga helaan beerta, Waxaad weydiin kartaa, waa maxay shaqadooda? Sharci -yaqaan hantiile aqooneed wuxuu asal ahaan la shaqeeyaa kuwa leh xuquuqda diyaarinta shatiyada iyo calaamadaha ganacsiga iyo daba -galka dacwad ka dhan ah qof kasta oo ku xadgudba xuquuqda qof kale.
Sidaas darteed, shaqadu waxay hoos imaanaysaa qareenka. Xusuusnow, noqoshada takhasus aagga waxay u baahan tahay inaad haysato shahaadada bachelorka ee barashada paralegal -ka iyo shahaadada paralegal -ka.
4. Kalkaaliye Kalkaaliye
Mushaharka Sannadlaha: $ 82,687
Kani waa khabiir kale oo qareen oo aad u mushahar badan adduunka. Asal ahaan, Kalkaalisada Kalkaaliye-yaqaanka waa khabiir ku-meelgaar ah oo ka caawiya fasiraadda warbixinnada caafimaadka ama hadal-haynta, ka marag fura maxkamadda arrimaha ku saabsan caafimaadka iyo sidoo kale u diyaariya soo-koobidda caafimaadka shirkadaha caymiska, qareennada, iyo isbitaallada.
Xusuusnow, si aad u noqoto kaaliye kalkaaliye caafimaad, waa inaad noqotaa kalkaaliye caafimaad oo si buuxda u diiwaangashan oo ay tahay inuu ka gudbay tababbarka sharci ee Ururka Qareennada Mareykanka iyo imtixaanka Guddiga Shahaadada La -taliyaha Kalkaalisada La -taliyaha Kalkaaliyaha Sharciga ee Mareykanka.
5. Sharciga Shaqaalaynta iyo Sharciga Shaqaalaha
Mushahar Sanadeed; $ 80,685
Sharci -yaqaan kale oo sarreeya oo guriga la taga mushaharka baruurta sababta oo ah shaqada uu/ay qabato waa khabiir ku -xigeenka Sharciga Shaqaaleynta Paralegal.
Sharci -yaqaan noocan ah wuxuu wakiillada iyo ganacsiyada kala shaqeeyaa arrimaha khuseeya ku -celcelinta ganacsiga. Waxay si joogto ah u maareeyeen arrimaha la xiriira shaqo joojinta, murannada ilaalinta iyo sidoo kale shaqo la'aanta.
Si aad ugu beddesho shaqo wax ku ool ah iyo sharciyeynta sharciga shaqada, waa inaad haysataa shahaadada la -hawlgalaha ama bachelor, karti awood leh oo awood leh, iyo aqoon fiican u leh dacwadaha maxkamadda ee hababka maxkamadda iyo hababka la xiriira ganacsiga iyo sharciga shaqada.
6. Paralegal -ka Dawladda
Mushahar Sanadeed; 78,478
Paralegal-ka dawladdu waa shaqo kale oo paralegal ah oo mushahar badan ku leh adduunka oo mudan in la aado. Asal ahaan, a garyaqaanka dawladda wuxuu ka shaqeeyaa kormeerka qareenka goob sharci la xiriirta dowladda oo ku saabsan arrimaha sharciga sida kiisaska maxkamadda.
Khabiirkan sharci -yaqaanku wuxuu kaloo gacan ka geystaa horumarinta jagooyinka siyaasadda, diyaarinta isgaarsiinta iyo marqaatiyada iyo sidoo kale samaynta cilmi -baaris ku saabsan sharciyada iyo xeerarka.
In kasta oo xirfaddani si fiican u bixiso, waa inaad haysataa shahaado sharci, shahaadada bachelorka, iyo waayo -aragnimo sannado ka hor intaadan halkaas ka shaqayn.
7. Sargaal Sare
Mushaharka Sannadlaha: $ 69,995
Sarkaalka sare waa kaaliye sharci yaqaan oo khibrad badan u leh aagga marka loo eego baaraaliyayaasha kale ee waaxdooda.
Sida garyaqaan sare, inta badan waxaa laguu xilsaaray mas'uuliyado shaqo oo aad u casrisan waxaadna u shaqayn kartaa si ka madaxbannaan xubnaha kale ee kooxda.
Waxaad kaloo maamuli doontaa dukumiintiyada xasaasiga ah iyo mas'uuliyadaha kale ee sare ee ururka.
Xusuusnow, sida Paralegal-ka Dowladda, waxaad u baahan doontaa 3-5 sano oo waayo-aragnimo ah xagga arrimaha sharciga ama dowladda, shahaado-siistemka, iyo sidoo kale shahaadada bachelor-ka ama wax u dhigma ka hor intaadan noqon kaaliye sare.
8. Paralegal -ka shirkadaha
Paralegal-ka shirkaddu waa jago kale oo mushahar sare leh. Sharci -yaqaannada shirkadaha ayaa sida caadiga ah ka shaqeeya waaxyaha sharciga ee shirkadaha waaweyn.
Adigoo ah garyaqaan shirkad ah, waxaad ka caawin doontaa qareennada hubinta in ganacsiga ururka iyo hababka qorista ay yihiin kuwo sharci ah.
Intaa ka sokow, waxaad mas'uul ka noqon doontaa sameynta dukumiintiyada, sameynta baaritaanka, sameynta qoraallada iyo warbixinnada, iyo caawinta wareysiyada
9. Dacwad -oogaha Difaaca Dadweynaha
Mushaharka Sannadlaha: $ 65,971
Ku shaqaynta difaaca dadweynaha waa takhasus kale oo sharci -yaqaan ah oo si fiican u bixiya. Waxay kaloo ka mid tahay qareennada ugu mashquulka badan warshadaha sharciga.
Adigoo ah Difaac Dadweyne, waxaad maamuli doontaa baaritaanka xaqiiqda, jadwalka wareysiga, iyo abaabulka dhageysiga maamulka
Intaa waxaa sii dheer, waxaad ka caawin doontaa sameynta waraaqaha iyo caawinta inta lagu jiro tijaabooyinka. Xusuusnow, waxay u fiicnaan doontaa inaad haysato shahaadad sharciyeed haddii aad rabto inaad noqoto difaac dadweyne maxaa yeelay meheraduhu waxay doorbidaan musharraxiinta shaqada ee leh shahaadooyinka balaale.
10. Sharciga caalamiga ah ee balaale
Mushaharka Sannadlaha: $ 62,472
Sharci -yaqaanka sharciga caalamiga ah waa kan xiga ee ugu mushaharka badan barasho ee liiskayaga ku jira. Waxay mas'uul ka yihiin qiimeynta sheegashooyinka sharciga iyo arrimaha kale ee sharciga caalamiga ah.
In kasta oo meheradaha qaarkood ay doorbidaan nin sharci -yaqaan ah oo haysta shahaadada bachelorka, badidoodu waxay kaliya dalbadaan shahaado -siinta baaluqnimada. Awoodo cilmi -baaris oo heer sare ah iyo indho -fiiqnaan faahfaahsan ayaa iyagana loo baahan yahay.
Waxaa aad muhiim u ah in la ogaado in, qaar ka mid ah garyaqaannada sharciga caalamiga ahi ay u shaqeeyaan shirkado sharci oo gaar loo leeyahay oo xoogga saara sharciga ganacsiga, xeerka heshiiska, iyo meelaha kale ee sharciga caalamiga ah.
Kuwa kale waxaa u shaqeeya ururo caalami ah sida Ururka Ganacsiga Adduunka (WTO), Bangiga Adduunka (WB), iyo Ururka Dawladaha Mareykanka.
11. Dhibane Shakhsi oo Ka Tirsan Baraqa
Mushaharka Sannadlaha: $ 60,691
Paralegal-ka dhaawaca shaqsiyeed waa booska xiga ee ugu mushaarka badan liisaska liiskayaga. Sharci -yaqaanka dhaawaca shakhsiga ayaa sida caadiga ah la shaqeeya qareennada dhaawaca shakhsiyeed ee ku takhasusay aaggan.
Baaritaanka sharciga gobolka ee khuseeya, wuxuu wareysi la yeeshaa macaamiisha, wuxuu ururiyaa warbixinnada caafimaadka iyo macluumaadka caymiska wuxuuna ku caawiyaa diyaarinta dejinta.
Sharci -yaqaanka dhaawaca shakhsiga ayaa sida caadiga ah loo baahan yahay si ay u haystaan ​​ugu yaraan shahaadad la xiriirta sharciga.
12. Paralegal Freelancer
Mushaharka Sannadlaha: $ 58,507
Shaqaale ka tirsan balaale oo madaxbanaan ayaa ku habboon paralegal oo raadinaya shaqo waqti-dhiman ah. Baarayaal madaxbanaan, oo mararka qaarkood loo yaqaanno garyaqaanno qandaraasle ah, ayaa ku shaqeeya heshiis qandaraas qareeno.
Taas macnaheedu waa in garyaqaanno madaxbannaan ay yihiin madaxdoodii oo ka shaqayn kara mar kasta iyo meel kasta oo ay rabaan.
Qoraallada madaxa bannaan ee madaxa bannaan iyo qoraallada, tafatirka dukumiintiyada, markhaatiyada waraysiga iyo sidoo kale waxay gacan ka geystaan ​​diyaarinta tijaabada iyagoo fulinaya u yeerista maxkamadda iyo gudbinta dukumiintiyada maxkamadda.
13. Dacwadda Dacwadda
Mushaharka Sannadlaha: $ 55,401
Dacwad-oogaha Dacwadda waa mid ka mid ah garyaqaannada ugu mushaharka badan adduunka guud ahaan. Waxay mas'uul ka yihiin diyaarinta agabyada dacwadaha maxkamadda, xereynta dukumiintiyada qareennada, iyo sidoo kale inay u noqdaan xiriiriyaha dhammaan dhinacyada ku lug leh kiiska.
Shuruudaha aasaasiga ah ee noqoshada garyaqaan maxkamadeed waxay ku kala duwan yihiin hal meherad ilaa tan xigta.
Qaar ka mid ah garyaqaannada dacwada ayaa heli kara khibrad shaqo. Kuwo kale waa inay haystaan ​​shahaadada koowaad ee jaamacadda ama shahaado sharci ka hor inta aan la qorin.
14. Sharciga Qoyska Paralegal
Mushaharka Sannadlaha: $ 59,346
Sharciga qoysku waa aag dhaqameed oo kala duwan maadaama uu daboolayo barashada sharciga oo ku saabsan noocyada kala duwan ee cilaaqaadka ka dhexeeya shaqsiyaadka wadaaga xiriirka qoyska.
Qaybtaan sharci -yaqaanku waxay u diyaariyaan caddaymaha dhegeysiga, cilmi -baarista sharciyada khuseeya, iyo qabyo -qoraalka dukumentiyada iyo warbixinnada. Waxay badanaa u shaqeeyaan qareeno ku takhasusay haynta ilmaha, furriinka, korsashada, iyo arrimo kasta oo la xiriira qoysaska iyo sharciga.
15. Qorshaynta Hantida iyo Asluub ​​-ilaaliyaha
Mushaharka Sannadlaha: $ 53,623
Qorshaynta hantida iyo dardaaranka garyaqaanadu waxay filan karaan inay kasbadaan wax ka badan $ 54,000 sanadkii celcelis ahaan. Waxay ka caawiyaan geedi socodka qorshaynta guryaha, masuuliyadoodana waxaa ka mid ah samaynta jadwalka qoondaynta aamminaad-hoosaadka iyo qorshayaasha qaybinta, iyo waxyaabo kale, ururinta iyo diyaarinta dukumiintiyada ogeysiinaya ka-faa'iideystayaasha.
Xusuusnow, si aad ugu shaqayso sidii qorsheynta guryaha iyo u-doodaha kalkaaliye, waa inaad marka hore dhammaystirtaa barnaamij paralegal-ka ABA-ansixiyey, haddii ay tahay shahaado, shahaadada la-shaqaynta, ama shahaadada bachelor-ka. Ugu yaraan lix bilood oo tababar ah ayaa sidoo kale lagu talinayaa.
16. Paralegal -ka Guryaha Guryaha
Mushaharka Sanadlaha ah: 53,406
Haddii aad xiisaynayso hantida maguurtada ah, dariiqa mihnadeed ee sharciga ah ayaa ku habboon adiga. Sharci -yaqaanka hantida maguurtada ah waxay kasbadaan wax ka yar $ 53,000 sanadkii celcelis ahaan. Waxay diyaar u yihiin inay kiraystaan ​​mid kasta oo ka mid ah dhinacyada soo socda: qareeno, iibsadayaal, iibiyayaal, amaahiyayaal, iyo wakiilo.
Asal ahaan, Paralegal Real Estate Paralegal wuxuu diyaariyaa dukumiintiyada hantida maguurtada ah, wuxuu ka kooban yahay waraaqo wuxuuna fayl gareeyaa dukumiintiyada xiritaanka posy.
Qaybta sharci -yaqaanku waxay ka mid yihiin waaxaha adduunka ee ku koraya heer jibbaar ahaan ku habboonaanta iyo mushaarka labadaba. Tan micnaheedu waxaa weeye go’aaminta in aad gasho xirfad sidaas oo kale ma ahaan doonto fikrad xun haba yaraatee.
Markaad ogaato khabiiradaan sharci -yaqaannada ugu mushaharka badan, waxaad arki kartaa fursadda weyn ee ka jirta suuqan.
15 Shaqooyinka Mushaharka ugu sarreeya leh Shahaadada cilmiga bulshada
15 Bixinta ugu Sareeya 2 Digrii ee Adduunka
21 Shaqooyin oo bixiya $ 25 saacaddii
Shaqooyinka IT -ga ee ugu Lacagta Badan Adduunka | 10ka Xirfadood ee IT -ga ugu sarreeya
11 Shaqooyinka Waxaad ku sameyn kartaa Fasal aqooneed iyo mushahar
15 WWE DIVA EE UGU SAREEYA ADDUUNKA
Intee in le'eg ayay Servers ka kasbadaan USA? | Adeegayaasha ugu mushaarka badan 2021
Ma tahay ama ma doonaysaa inaad khabiir ku noqoto dhanka IT-ga? Xirfadaha la xiriira teknoolojiyadda ayaa sare u qaaday…
Ma xiisaynaysaa inaad noqoto naqshadeeye? Ma waxaad waydiinaysaa inaad ogaato cidda ugu mushaharka badan? Sidee…
Lacag samaynta waa shay qof walba doonayo inuu sameeyo, heck waa sababta aan xitaa uga tagno sariiraha raaxada leh…